Aquaris X2 iyo Aquaris X2 Pro: BQ wuxuu mar kale u adeegsadaa Android One | Androidsis
BQ waa sumadda Isbaanishka ugu caansan suuqa. Sidoo kale kuwa ugufiican halkaas maanta maadaama ay caan ku yihiin taleefannadooda tayada leh. Astaantu waxay ka mid ahayd marka hore ku bood boodada Android One, markay bilaabeen 'Aquaris A2015' sanadkii 4.5. Hadda, waxay qayb ka yihiin mashruucan mar labaad iyagoo wata laba taleefannadooda cusub, Aquaris X2 iyo Aquaris X2 Pro.
Tan iyo markii taleefankaasi la furay saddex sano ka hor, BQ lama shaqeynin Android One markale. Laakiin, tani waxay beddeli doontaa mahadnaqa labada aaladood ee cusub ee ay horeba noogu diyaariyeen. Laba taleefan oo aan hore uga filaynay faahfaahin qaar.
BQ wali ma aysan soo saarin qeexitaanka Aquaris X2 iyo Aquaris X2 Pro. In kasta oo sumadda lafteedu ay sheegtay inay iyagu tahay cusub sare ee kala duwan. Sidaa darteed, waxaan filan karnaa qeexitaanno ku dhejin doona taleefannada taleefannada qeybta dhexe. In kastoo ay tahay inaan sugno si aan ula kulanno si aan u xaqiijino tan.
Sawirka ay shirkaddu soo saartay mid ka mid ah labada moodel waad arki kartaa taas Aquaris X2 Pro wuxuu muujinayaa naqshad leh muraayad gadaal u jirta. Marka calaamadda waxaa lagu dhiirrigeliyay taleefannada sida iPhone X. Waxyaabaha sidoo kale lagu muujiyey goobta iyo qaabka ay ku taal labada qol ee qalabka. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale dhabarka ku haynaa akhristaha faraha.
BQ waxay ku biirtay moodada looxyada hoos udhaca leh Aquaris X2 iyo Aquaris X2 Pro. Sidaa darteed, waxaa na horyaalla laba aaladood oo cusub oo qaabkoodu yahay 18: 9. Shirkada Isbaanishka ayaa dooratay inay raacdo isbeddellada suuqa ee arrintan la xiriira. Wax ka caawin kara waxqabadka taleefannada suuqa.
Iskuxirka Android One micnaheedu waa inaysan jiri doonin lakab habeyn ah iyo in cusbooneysiinta la damaanad qaadayo ugu yaraan laba sano. Wali lama xaqiijin wax ku saabsan bilaabitaankeeda. Marka waa inaan sugnaa BQ wax badan nooga sheeg Aquaris X2 iyo Aquaris X2 Pro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Aquaris X2 iyo Aquaris X2 Pro: Telefoonada cusub ee BQ ee wata Android One
Bixinta Google: Cusboonaysiinta Android Pay durbaba waa run
Kiiboodhka caanka ah ee loo yaqaan 'Swype keyboard' mar dambe lama taageerayo